Fanarenana ny Air Madagascar : Nankatoavina ny fifanarahana amin’ny Deutsche Bank AG -
AccueilSongandinaFanarenana ny Air Madagascar : Nankatoavina ny fifanarahana amin’ny Deutsche Bank AG
09/03/2018 admintriatra Songandina 0
Hotafarina tsy ho ela ny orinasam-panjakana misahana ny fitaterana an’habakabaka, Air Madagascar. Fantatra mantsy ankehitriny, fa nankatoavin’ireo loholona tetsy Anosikely, ny volavolan-dalàna lah.03/2018 mametra ny fanitsiana ny fifanarahana fampisamboram-bola iahiana ny fanarenana ny orinasam-pitaterana an’habakabaka Air Madagascar.
Marihina fa fifanarahan’ny Repoblikan’i Madagascar sy ny Deutsche Bank AG, London Branch ary ny TMF Global Service (UK) Limited izany.
Teo ihany koa ny fandaniana ny volavolan-dalàna lah.04/2018 mametra ny fanitsiana ny fifanarahana findramam-bolan’ny Repoblikan’i Madagasikara andaniny sy ny Deutsche Bank AG, London Branch, ankilany. Izany dia handraisan’ny Tahiry Afrikanina momba ny Fampandrosoana (FAD) sy ny Banky Afrikanina momba ny Fampandrosoana (BAD) anjara ny fiantohana izany.
Araka izany, voalaza fa mitentina 400 tapitrisa Dolara no hotrosain’i Madagasikara hoenti-manarina tanteraka ny orinasa Air Madagascar. Ao anatin’ny fito taona kosa no hamerenan’i Madagasikara izany vola izany.
Ankoatra izay, dia nankatoavin’ireo mpikambana eo anivon’ny Antenimieran-doholona ihany koa ny volavolan-dalàna lah.049/2017, ny 8 desambra 2017, izay manome alalana ny fifanaovan-tsonia mikasika ny sata mifehy ny Banque Asiatique d’Investissement et Infrastructure. Ny fidiran’i Madagasikara amin’io banky io kosa indray ny mba ahafahan’ireo sehatra miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana misitraka ny fanampiana ara-teknika sy ara-bola.
Teo ihany koa ny volavolan-dalàna lah.052/2017, ny 21 desambra 2017, izay manome alalana ny fifanaovan-tsonia ny findramam-bola mitentina 110 tapitrisa Euros ho fanatsarana ny lalàna eto Madagasikara. Manaraka izany ny fankatoavana ny volavolan-dalàna lah.053/2017, ny 21 desambra 2017, izay manome alalana ny fifanaovan-tsonia ny findramam-bola mitentina 30 tapitrisa Euros. Izany no natao mba hoenti-manatanteraka ilay tetikasa momba ny Jirama Andekaleka Hydro-expansion niarahan’ny Repoblikan’i Madagasikara sy ny Banque Européenne d’Investissement (BEI).
Hery Rajaonarimampianina : « Ny fiatrehana ny fifidianana no ilain’ny firenena »